Wafdi uu hoggaaminaayo ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta u dhoofay dalka Itoobiya – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hoggaaminaayo ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta u dhoofay dalka Itoobiya
Wafdi uu hoggaaminaayo ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyagoona kusii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya kaga qeyb-gali doonno shirka ay maanta halkaasi ku yeelanayaan madaxda urur goboleedka IGAD.
Shirkaasi ayaa waxaa diiradda lagu saari doonnaa xaaladda cakiran ee haatan ka jirta Koonfurta dalka Sudan.
Dhinaca kale, safarka ra’iisul wasaare Kheyre ee Itoobiya ayaa noqonaya kii ugu horeeyay uu ku tago dalkaasi tan iyo markii xilka loo magacaabay.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa dhawaan iclaamiyay shir deg-deg ah oo ay yeelanayaan madaxda dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD, waxaana shirkaasi looga hadlayaa xaaladda cakiran ee ka taagan dalka Koonfurta Sudan.
Madaxweyne Farmaajo oo ka mid ahaa madaxdii shirkaasi lagu casuumay ayaa ka cudur-daartay ka qeyb-galkiisa, wuxuuna badalkiisa diray ra’iisul wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.